Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Ihu gị bụ NJ ọhụrụ gị ịga njem: Biometrics dị mma!
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Akụkọ Ọchịchị • News • Technology • Tourism
Site na nlele akwụkwọ ndị ọzọ maka COVID-19, oge nhazi na ọdụ ụgbọ elu na-ewe ogologo oge. Tupu COVID-19, nkezi ndị njem nọrọ awa 1.5 na usoro njem (nbanye, nchekwa, njikwa oke, kọstọm na ebubo ibu). Ihe data dị ugbu a na-egosi na oge nhazi ọdụ ụgbọ elu agbagoro ruo awa 3 n'oge ọnụ ọgụgụ njem na naanị ihe dịka 30% nke ọkwa tupu COVID-19.
International Air Transport Association (IATA) kwupụtara nsonaazụ ya 2021 Global Passenger Survey (GPS), nke weputara nkwubi okwu abụọ:
Ndị njem chọrọ iji njirimara biometric ma ọ bụrụ na ọ na-eme ka usoro njem dị ngwa.
Ndị njem chọrọ iwepụta obere oge na-akwụ n'ahịrị.
“Ndị njem ekwuwo okwu ma chọọ ka teknụzụ na-arụsi ọrụ ike karị, yabụ ha na-ewepụta obere oge 'na-ahazi' ma ọ bụ guzoro n'ahịrị. Na ha dị njikere iji data biometric ma ọ bụrụ na ọ na-ewepụta nsonaazụ a. Tupu okporo ụzọ ebili elu, anyị nwere windo ohere iji hụ na nlọghachi nke ọma na njem mgbe ọrịa ahụ gasịrị ma wepụta mmezi arụmọrụ ogologo oge maka ndị njem, ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ elu, na gọọmentị, "Nick Careen, Onye isi osote onye isi oche nke IATA kwuru. Nchekwa, na nchekwa.
Njirimara nke mmiri
73% nke ndị njem dị njikere ikesa data biometric ha iji melite usoro ọdụ ụgbọ elu (site na 46% na 2019).
88% ga-ekekọrịta ozi mbata na ọpụpụ tupu ọpụpụ maka nhazi ngwa ngwa.
Ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị njem (36%) ahụtala iji data biometric mgbe ha na-eme njem. N'ime ndị a, 86% nwere afọ ojuju na ahụmahụ ahụ.
Nchedo data ka bụ isi okwu yana 56% na-egosi nchegbu gbasara mmebi data. Ndị njem na-achọkwa idoanya na onye a na-ekerịta data ha (52%) yana otu esi eji / hazie ya (51%).
55% nke ndị njem chọpụtara na kwụ n'ahịrị n'ịbanye dị ka ebe kachasị elu maka nkwalite.
41% nke ndị njem chọpụtara ị kwụ n'ahịrị na nyocha nchekwa dị ka ihe kacha mkpa maka nkwalite.
38% nke ndị njem chọpụtara oge kwụ n'ahịrị na njikwa oke / mbata na ọpụpụ dị ka mpaghara kacha elu maka nkwalite.
Mmụba nchere kacha ukwuu bụ na nbanye na njikwa oke (mpụga na mbata na ọpụpụ) ebe a na-enyocha nzere ahụike njem tumadi dị ka akwụkwọ akwụkwọ.
Nke a karịrị oge ndị njem chọrọ itinye na usoro na ọdụ ụgbọ elu. Nnyocha ahụ chọpụtara na:
85% nke ndị njem chọrọ iji ihe na-erughị 45 mins na usoro na ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụrụ na ha na-eji naanị akpa aka eme njem.
90% nke ndị njem chọrọ iji ihe na-erughị otu awa na usoro na ọdụ ụgbọ elu mgbe ha na-eme njem na akpa ego.
IATA, na-arụkọ ọrụ na ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ, nwere mmemme abụọ tozuru okè nke nwere ike ịkwado ọganihu na-aga nke ọma nke mgbasa ozi ụgbọ elu na-ebute ọrịa na-efe efe ma nye ndị njem njem ahụmahụ ngwa ngwa ha na-achọ.
IATA Njem njem bụ ihe ngwọta iji jikwaa ọtụtụ mgbagwoju anya n'ihe gbasara ahụike njem nke gọọmentị chọrọ. Ngwa ahụ na-enye ụzọ nchekwa na nchekwa maka ndị njem iji lelee ihe achọrọ maka njem ha, nata nsonaazụ ule wee nyochaa asambodo ọgwụ mgbochi ha, chọpụta na ndị a na-emezu ebe aga na ihe ndị chọrọ njem wee kesaa ndị ọrụ ahụike na ndị ọrụ ụgbọ elu n'enweghị mgbakasị ahụ tupu ha apụ na iji. e-ọnụ ụzọ. Nke a ga-ebelata kwụ n'ahịrị na mkpọchị maka nlele akwụkwọ - maka abamuru nke ndị njem, ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ elu na gọọmentị.
Otu NJ bụ atụmatụ na-enyere ụlọ ọrụ mgbanwe aka ruo ụbọchị mgbe ndị njem nwere ike isi na mgbochi gaa n'ọnụ ụzọ ámá site na iji otu akara njem biometric dị ka ihu, akara mkpịsị aka ma ọ bụ iris scan. Ụgbọ elu na-akwado atụmatụ a. Ihe kacha mkpa ugbu a bụ ịhụ na e nwere ụkpụrụ iji kwado ọhụụ nke ahụmahụ njem na-enweghị akwụkwọ. Otu ID agaghị eme ka usoro dị mma maka ndị njem, kamakwa na-enye ohere ka gọọmentị jiri akụrụngwa bara uru nke ọma.
"Anyị enweghị ike ịlaghachi azụ ka ihe dị na 2019 ma na-atụ anya ka afọ ju ndị ahịa anyị. Tupu ọrịa a na-efe efe anyị nọ na-akwado iji One ID were were ọrụ onwe ya gaa n'ọkwa ọzọ. Ọgba aghara ahụ na-eme ka nkwa ya ejima ya nke ịrụ ọrụ na nchekwa ego na-efu ọbụna ngwa ngwa karị. Anyị na-achọkwa teknụzụ dị ka IATA Travel Pass iji nwetaghachi ọrụ onwe onye ma ọ bụ nyocha akwụkwọ ga-ejupụta na mgbake ahụ. Nsonaazụ GPS bụ ihe ọzọ na-egosi na mgbanwe dị mkpa, "Careen kwuru.
Nsonaazụ GPS dabere na nzaghachi 13,579 sitere na mba 186. Nnyocha ahụ na-enye nghọta n'ihe ndị njem ga-amasị site na ahụmahụ njem ụgbọ elu ha. Gaa na nke a njikọ iji nweta nyocha zuru oke.